Madaxweynaha Uganda oo loo Wakiishay xal u Helidda xiisadaha Burundi – Radio Daljir
Luulyo 15, 2015 7:26 b 0
Arbaco, Luuliyo 15, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa wada xaajood nabadeed ka bilaabay dalka Burundi, iyadoo lagu wado in dhamaadka bishan ay dalkaas ka dhacdo doorashada Madaxtinimada.
Yoweri Museveni ayaa maalintii shalay safar dhinaca dhulka ah ku tagay Burundi, waxaana uu la kulmay siyaasiyiinta, bulshada rayidka, hogaamiyeyaasha diimaha iyo kooxaha mucaaradka, isagoo kala hadlay dhibaatooyinka ka taagan dalkaas.
Madaxweynaha Uganda ayaa doonaya inuu xal u helo kala aragti duwnaaanshaha dhinaca siyaasada ee ka jirta dalkaas, gaar ahaan qalalaasaha dhinaca siyaasada ee ka jira wadankaas.
Museveni ayaa xalay kulan wada jir ah la qaatay Mucaaradka siyaasada, wakiil ka socda Xukuumadda iyo Madaxweynayaashii hore ee dalka Burundi soo maray, waxaa la sheegayaa in aanu war wanaagsan ka helin Mucaaradka.
Mucaaradka ayaa wali diidan in mar saddexaad uu xafiiska qabto Madaxweyne Nkurunziza, waxaana la ogeyn sida uu Madaxweyne Museveni ugu guuleysan karo xalinta is mari waaga arrintan ka taagan
Dadaalo ay wadeen Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ayaa horay u guuldareystay, kadib markii ay isku dayeen in Madaxweynaha talada haya iyo Mucaaradka inay is faham ka dhex abuuraan.
Rabshado bilowday dhamaadkii bishii April ayaa ka dambeeyay markii Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu isu soo taagayo mar saddexaad madaxtinimada.
In ka badan 50-ruux ayaa ku dhintay rabashadaha, halka boqolaal kun oo ruux ay ku barakaceen dalalka deriska, waxaana jirta cabsi laga qabo in mar kale dalkaas uu ka qarxo dagaalka dhinaca Jinsiga ee 20-sano ka hor dalkaas ka dhacay ee qowmiyadaha Hutu iyo Tutsi-ga tirada yar.
Urur goboleedka Beesha Bariga Afrika ayaa qorsheynaya in la soo afjari qalalaasaha dhinaca siyaasada ee ka jira Burundi, waxaana dhowaan ay baaq u jeediyeen Madaxweynaha Burundi oo ahaa inuu dib u dhigo doorashada Madaxtinimada.
Maxkamada ku taala Scotland oo Nin Somali ah ku Heshay danbi Dil ah